Xukuumadda oo Macnuucday in Baasaboorka Soomaaliya ee Lagu Dhex Sameeyo Somaliland In Lagu Safro – WARSOOR
Xukuumadda oo Macnuucday in Baasaboorka Soomaaliya ee Lagu Dhex Sameeyo Somaliland In Lagu Safro
Hargaysa – (warsoor) – Xukuumadda Somaliland ayaa maanta ku dhawaaqday in ay mamnuucday in baasaboorka Soomaaliya ee lagu sameeyo Somaliland gudaheeda in aanu lagu safri doonin dalka dibadiisa. Go’aankan oo ay maanta si wadda jir ah u soo badhigeen wasaaradda Arimaha Gudaha iyo Wasaaradda Duulista Hawadda Somaliland.
Shirkan oo ka dhacay wasaaradda Arimaha Gudaha Somaliland waxaa ka soo qayb-galay Wasiirada Wasaaradaha Arrimaha Gudaha Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir, Wasiirka Duuliska, Hawada iyo gaadiidka Cirka Farxaan Aadan Haybe, oo ay wehelinayaan Wasiiru Dawlaha Amniga Maxamed Muuse Diiriye, Taliyaha Ciidamada Boliska Sareeye Guudo Cabdillaahi Fadal Iimaan, iyo Taliyaha Ciidanka Laanta Socdaalka Maxamed Cismaan Caalin.
Shirkan ayaa lagu mabnuucay guud ahaanba in lagu joojiyey isticmaalka iyo ku Safrida Baasaboorka Soomaaliya ee lagu sameeyo gudaha Somaliland.
Shirkan ayaa markii uu dhamaaday waxaa laga soo saaray go’aamadan hoos ku xusan:
Xukuumadda Somaliland ayaa hore u mamnuucday qaadashadda baasaboorka Soomaaliya ee lagu sameeyo dalka gudihiisa, waxaanay xukuumaddu albaabadda iskugu dhufatay guryo suuq-madow ah oo lagu samayn jiray baasaboorka Soomaaliya oo ku yaalay dalka gudihiisa.
Balse talaabadaasay may soo af-garin qaadashada baasaboorka Soomaaliya, muddo ka dib ayaa la soo sheegay in dalka gudihiisa hadda laga bilaabay samaynta baasaboorka Soomaaliya.
Halkan ka daawo shirka jaraa’id ee wasiirka arimaha gudaha: